Ny foto-kevitra: Velona sy mahery ary maharitra ny Fifohazana rehefa miorina sy miray ary tsy miala amin’ny fototra nanorenan’Andriamanitra azy. Koa “Tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny ati-lavaka izay nihadiana anareo” (Isa.51:1).
Ny votoatin-kevitra: Raha ny tantara no zohina, ny fanorenana sy fanatanterahana ny asan’ny Fifohazana teto Madagasikara dia tamin’ny alalan’ireo Raiamandreny izay natsangan’Andriamanitra, indrindra tamin’ireo fotoan-tsarotra nodiavin’ny firenena, dia : Dada Rainisoalambo Toby Soatanàna 1894-1904 (Pesta 1895 sy Fanjanahan-tany 1896), Neny Ravelonjanahary Toby Manolotrony 1900-1971 (Hetsiky ny Menalamba 1900), Mama Volahavana Germaine Nenilava Toby Ankaramalaza 1941-1998 (Ady lehibe faharoa 1935-1941 sy fana-fian’ny anglisy 1942), Dadatoa Rakotozandry Daniel Toby Farihimena 1946-1947 (Haza lambo ny Malagasy tia tanindrazana 1947).
Ireo no angady nananana sy vy nahitana, satria izy ireo no nanaovan’i Jesosy fanekena sy nomeny teny fikasana izay ho lovàn’ny taranaka rehetra mifandimby. Izany dia araka ny voasoratra hoe:
– “Ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany, satria nanaiky ny teniko hianao” (Gen.22:18).
– “Ny razanao no niraiketan’ny fitiavan’i Jehovah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy Izy mihoatra noho ny firenena rehetra, tahaka ny amin’izao anio izao” (Deo.10:15).
– “Raha Izaho, dia izao no fanekeko aminy, hoy Jehovah: Ny Fanahiko Izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala amin’ny vavanao, na amin’ny vavan’ny taranakao, na amin’ny vavan’ny taranaky ny taranakao, hatramin’izao ka ho mandrakizay, hoy Jehovah” (Isa.59:21).
Vato fanorenana ny Fifohazana sy ny asany izy ireo sady fiasàm-pahasoavana ho an’ny fiangonana, ary mpaminany mpitondra ny hafatr’Andriamanitra no mpisorona mivavaka sy mifona ho an’ny tany sy ny firenena, eny, ho an’ny maro maneran-tany koa aza, dia “fantsom-pitahiana” sy “fitaovam-pamonjena” amin’ny andro mahory.
Fa voasoratra hoe:
– “Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, « fanjakà-mpisorona, firenena masina » (Eks.19.6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran’Ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga” (1 Pet.2:9). “Fa aoka ho fantatrao izao: fa any am-parany any dia hisy andro mahory” (2 Tim.3:1). “Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany” (Apok.3:10).
Ny Tenin’Andriamanitra, dia ny Soratra Masina no manorina ny Fifohazana sy ny Fampianarany araka izay nanendren’i Jesosy izany tamin’ny alalan’ireo Raiamandreny, araka ny nitenenan’ny Apostoly Paoly manao hoe: “Natsangana teo ambonin’ny fanorenan’ny Apostoly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra” (Efes.2:20).
Asan’ny Fanahy Masina ny Fifohazana: “Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany” (Asa.1:8). “Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia niteny tamin’ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan’ny Fanahy Masina azy” (Asa.2:4).
Asa teran-tany teto Madagasikara fa tsy nanaovana kopia ny avy tany ivelany: “Fa Izaho no andrasan’ny nosy” (Isa.60:9b). “Tonga hanipy afo etỳ ambonin’ny tany Aho, ka manao ahoana ny faniriako mba hirehetan’izany sahady?” (Lio.12:49), fa voatendry kosa hivelatra hatrany amin’ny faran’ny tany: “Fa ny tany ho henika ny fahalalana an’i Jehovah, tahaka ny anaronan’ny rano ny fanambanin’ny ranomasina” (Isa.11:9b). “Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo” (Mat.28:19-20°). “Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin’izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra” (Mar.16:15).
Asan’ny Tenin’Andriamanitra Velona izay tsy voasakana izy: “Ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” (2 Tim.2:9b), sady mamoa tsy mitsahatra no maharitra. Hoy Jesosy: “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny anarako na inona na inona” (Jao.15:16). “Na dia maty aza izy, dia mbola miteny ihany” (Heb.11:4b).
Ny hafatra: Hajao ny Raiamandreny ka hazòny ny Fampianarana napetrany ary aza avela ho faty ny fahatsiarovana azy. Hoy ny mpaminany Isaia: “Tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny ati-lavaka izay nihadiana anareo” (Isa.51:1). Hoy ny Apostoly Paoly: “Manajà ny ray sy ny reninao (fa izany no didy voalohany misy teny fikasana), mba hahita soa hianao sy ho maro andro ambonin’ny tany – Deo.5:16” Efes.6:2-3. Ary aza miherikerika foana (Isa.41:10), fa “Tomoera tsara, ka hazòny ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo” (2 Tes.2:15a).
FEHINY: Jesosy Kristy niteny sy niasa mahery tamin’ny alalan’ireo Raiamandreny no fahaveloman’ny Fifohazana. Koa
“VELOMY NY FIFOHAZANA, ARY AZA MIALA AMIN’NY FOTOTRA”